Somaliland: Diiwaangalinta Codbixiyeyaasha Oo Sabtidda Ka Bilaamaysa Gobolka Sanaag - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Diiwaangalinta Codbixiyeyaasha Oo Sabtidda Ka Bilaamaysa Gobolka Sanaag
Diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa la filayaa in ay maalinta Sabtidda ah ee 15-ka bishan July si rasmi ah uga bilaabanto gobolka Sanaag iyo degmooyinkiisa. Waxaana la qorsheeyay in 196 goobood in ay ka dhacdo diiwaangelintu.
Xubno ka mid ah komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa gobolka Sanaag ayaa gobokaasi ka waday hawlaha loogu diyaar-garoobayo sidii diiwaangelinta codbixiyeyaasha. iyadoo ay shirar iyo kulamo la yeelanayeen madax-dhaqameedka gobolka, wacyigelinta bulshadda, ababarka shaqaalaha, diyaarinta gaadiidka iyo sidoo kale qalabka dhinaca is-gaadhsiinta ee loo adeegsanayo fududaynta hawlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha.
Sidaasina waxaa noo xaqiijiyay af-hayeenka komishanka doorashooyinka Somaliland Siciid Cali Muuse, oo xalay khadka telefoonka ugu waramay wargeyska DAWAN, isagoo ku sugan magaaladda Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Halkaasi oo ay isaga iyo xubno kale ka tirsan komishanka doorashooyinku u joogaan abaabulka diiwaangelinta codbixiyeyaasha.
Isagoo arrimahaasi ka warbixinayayna waxa uu yidhi “Diiwaangelinta codbixiyeyaashu waxay goblka Sanaag ka bilaabmaysaa maalinta Sabtida ah, oo bisha July ay tahay 15-ka. Hawsha abaabulka iyo diyaar-garowgana waanu wadnaa, xagga amaanka goobaha ay diiwaangelintu ka dhacayso dawladda ayaa wadda oo xoojinaysa. Goobihiina waanu soo wada marnay, ee ay ka dhacayso diiwaangelintu oo waanu soo calaamadinay. Shirkadda Telesom-na way wadaa hawsheedda, goobaha Biraha laga taagayo, ee xagga Internet-ka iyo is-gaadhsiinta keenaya.
Tiradda goobaha gobolka Sanaag ee la qorsheeyay in diiwaangelintu ka dhaco, waa 196 goobood. Goob kastana sagaal qof oo shaqaale ah ayaa ka hawl-gelaya. Laba baabuur ayaana u jooga oo qaadaya qalabka iyo shaqaalaha. Wixii ka baxsan magaaladda Ceerigaabo gudaheeda 10 goobood ayaa ku yaalla”.
Waxa uu sheegay af-hayeenka komishanka doorashooyinka in ay tababarro u bilaabeen shaqaalaha ka hawl-gelaya goobaha diiwaangelinta kuwaasi oo bil ka hor la tababaray, hase yeeshee intii lagu jiray bishii Ramadaan oo fasax lagu jiray in dib loo xasuusinayo casharadii la baray.
Siciid Cali Muuse, waxa uu intaasi ku daray in ay kormeer ku soo mareen degmooyinka gobolka Sanaag, isla markaana ay kulamo la yeesheen bulshadda qaybeheedda kala duwan iyo madax-dhaqameedka oo ay kala hadlayeen sidii ay kaalintoodda uga qaadan lahaayeen hawlaha wacyigelinta iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha.
“Waxaanu dib u bilawdnay tababarkii ardayda, waayo waa kuwii bil ka maqnaa, markaa tababarkii ayaanu u bilawnay, iyadoo ardayda dib loo xasuusinayo wixii hore oo ay bishii la soo dhaafay dhigteen, oo Ramadaantii ay ka maqnaayeen. Maantana (shalay) malaintii labaad ayay ahayd, beri-na (maanta) qaybo kale ayaa tababarka gelaya. Waxa kale oo jira arday cusub oo oo ah kuwii hore ee aanu imtixaanka ka qaadnay, oo aanu u baahanay kuwii ay derejadoodu saraysay aanu ka qaadanay, oo iyagana tababarka gelaya. Waxaanu la shirnay dadka degaanka iyo madax-dhaqameedka oo aanu kala hadlaynay sidii qolo waliba degaankeedda u xoojisan lahayd. Wacyi gelin ku saabsan sidii ay u bilaabi lahaayeen hawshaasi iyo wacyigelintu waxay tahay iyo hawshu sida ay u soconayso in ay dadka u sheegaan”.
Mar uu ka hadlayay hawl-gelinta dhinaca gaadiidka ee lagu fulinayo hawsha diiwaangelinta iyo halka ay marayso hawsha wacyigelinta waxa uu yidhi “Waxa kale oo aanu samaynay, waxaa wacyigelinta ka qayb qaadanya oo fulinaya, afar urur oo kuwa NGOs-ka loo yaqaano ah, oo ay hay’addo soo siiyeen qandaraaska wacyigelinta, SDCO, mid la yidhaahdo HALGAN, AADO iyo mid kale oo ay leeyihiin dadka naafadda ah, ayaa bilaabay wacyigelinta oo maalmahan ka waday degaamadda gobolka Sanaag” ayuu yidhi af-hayeenka komishanka doorashooyinka Somaliland. Waxa kale oo la wadaa hawshii gaadiidka, oo shirkadii ku guulaysatay ay xisaabinayso ama qiimaynayso tiradda gaadiidka ka hawl-gelaya, iyadoo la diiwaangelinayo baabuurta, la iskana eegayo Tayadda baabuurta, waayo gobolkani waa gobol aad u baaxad weyn, degmooyinkiisuna ay kala fog yihiin, buuralay ah, loona baahan yahay baabuur iska celin karta ama mari karta dhulkaasi buuraha iyo dhagaxaanta ah”.
Waxa kale oo uu sheegay Siciid Cali Muuse, in maalinta Arbacadda ee todobaadka soo socda in magaaladda Ceerigaabo lagu qaban doono xaflad balaadhan oo lagu shaacinayo goorta ay diiwaangelinta codbixiyeyaashu ka bilaabmayso gobolka Sanaag. Isagoo ka faahfaahin ka bixinayay arrintaasi iyo mudadda loogu tallo galay in diiwaangelintu ka socoto goblka Sanaag, waxa uu yidhi “Maalinta la daah-furayo ama si rasmi ah loo shaacinayo, diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee gobolka Sanaag, waa maalinta Arbacadda ah ee soo socota. Waxaa ku xigaysa maalinta Khamiista ah oo iyadna goobaha fog-fog ee loo baahanyo in loo socdo wax ka badan maalin, waxaa la dirayaa shaqaalaha, qalabkoodda iyo gaadiidka qaadaya. Hase yeeshee inta badan gobolka shaqaalaha iyo baabuurta goobaha ay diiwaangelintu ka dhacayso waxaa la kala dirayaa, oo ay bilaabmaysaa maalinta Jimcaha ah. Marka ay maalinta Jimcaha wada baxaan, maalinta Sabtida ahna waxaa si rasmi ah gobolka oo dhan uga bilaabanaysa diiwaangelintii codbixiyeyaasha”.
Waxaanu intaasi ku daray “Sidii caadiga ahayd, ee goboladii kaleba 28 maalmood ayay diiwaangelintu ka soconaysaa. Magaaladda Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag, iyada 14 maalmood ayay marka hore diiwaangelintu ka soconaysaa. Wejiga labaad ama qaybta labaad ee diiwaangelinta goobaha waa la yaraynayaa, 10-kii goobood ee magaaladda Ceerigaabo gudaheedda ahaa, markaa waxaa isugu soo hadhaya 5 goobood. Degmooyinka kale iyaga 7 maalmood ayay ka soconaysaa, inta danbe goobo tiro yar ayaa la soo reebayaa, oo ah 21 maalmood ee hadhay. Dhulka Miyaga ah, iyagana waa 7 maalmood, meeshii la arko iyadoo dadku ku badan yahay, waa loo kordhinayaa goobaha oo taasi komishanka ayaa isla eegaya, meel-na laba rabo in dadkii oo jooga oo diiwaangelin u diyaar in laga yimaado. Komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland waxaa ka go’an inta mudadda ugu badan ee suurto-galka ah, mudadaasi in uu u diiwaangeliyo dadka, qof isagoo taagan oo safka ku jira sanduuqa laga soo qaadayaa ma jirayso”.
Gobolka Sanaag ayaa noqonaya gobolkii shanaad ee ay ka dhacdo diiwaangelinta codbixiyeyaasha, iyadoo hore looga soo qabtay goboladda Saaxil, Awdal, Togdheer iyo Maroodijeex. gobolkan Sanaag uu waxyaabo badan kaga duwan yahay goboladii hore looga soo qabtay diiwaangelinta, sida dhinaca amaanka, baaxadiisa iyadoo ay degmooyinkiisu kala fog yihiin iyo dhulka gobolkaasi uu ku yaallo oo badan dhul buuraley ah.
Siciid Cali Muuse, af-hayeenka komishanka doorashooyinka arrimahaasi sharaxaad ka bixinayayna waxa uu yidhi “Gobolkani wuu ka duwan yahay goboladdii hore ee diiwaangelinta codbixiyeyaasha looga soo qabtay, baaxadiisuna way balaadhan tahay, amaankiisuna wuu ka duwan yahay goboladii hore. Laakiin markii ay arrimahaasi ka wada tashadeen xukuumadda Somaliland iyo komishanka doorashooyinka qaranku, waxay is-la garteen in ay lagama maar-maan tahay amaanka in la xoojiyo, taasi oo ay xukuumaduna nala qaadatay”.
Dhinaca kale, waxaa la sheegay in magaaladda Ceerigaabo uu gaadhay taliyaha ciidamadda booliska Somaliland Sareeye guuto C/laahi Fadal Iimaan iyo saraakiil kale oo ciidamadda ka tirsan iyo sidoo kale wasiirro xukuumadda ka tirsan iyo masuuliyiin kale.
Diiwaangalinta Gobolka Sanaag
Madaxweyne Siilaanyo Oo Tacsi u diray Ehelkii ay ka baxday marxuumad Faadumo Axmed Ciise
Somaliland: Iibsashada Kaadhadhka Codbixiyayaasha Oo Burco Iyo Hargeysa Ka Bilaabmay+Cidda Iibsanaysa Iyo Qadarka Lacagta Lagu Kala Iibsanayo Oo Xogo Kasoo Baxayaan